अर्ल्ल्ट: Google क्रोम एक्सटेन्सन प्रयोग गरेर वेब पेज स्क्रैप गर्न कसरी
स्क्रिन स्क्रैपर एक लिपि हो जसले साइटहरू पढ्छ र वेबबाट उपयोगी जानकारी निकाल्छ।. स्क्रिन स्क्रैपिंग वेबसाइटहरू र वेब पृष्ठहरूबाट Microsoft Excel मा वास्तविक डेटा प्राप्त गर्ने अन्तिम समाधान हो. Google क्रोम एक्सटेन्सन स्क्रैर एक शक्तिशाली पर्दा स्क्रैपिंग उपकरण हो जसले विन्डोज र म्याक ओएस दुवै काम गर्दछ.
किन Google Chrome एक्सटेन्सन स्क्रैर?
Google Chrome एक्सटेन्सन स्क्रैर एक शक्तिशाली शक्तिशाली स्क्रैपिंग उपकरण हो जुन क्रोम वेब स्टोर मा निःशुल्क छ. यो स्क्रैपिंग उपकरण क्रोम ब्राउजरमा एक प्लगइनको रूपमा स्थापित छ. प्लगइनले ब्लगरहरू र विपक्षीहरूलाई वेब पेजबाट डेटा पुन: प्राप्त गर्न अनुमति दिन्छ जुन एक तत्वमा दायाँ क्लिक गरेर. '' स्क्रैप समान समान '' तपाईंको स्क्रिनमा पप अप गर्नुपर्छ यदि तपाइँ एक दायाँ क्लिक गर्नुहोस् एक तत्व.
XPaths को परिचय
XPath एक प्रोग्रामिंग भाषा हो जुन XML ढाँचाहरु मा महत्वपूर्ण जानकारी को लागी प्रयोग गरिन्छ. एचटीएमएल फाइल एक XML ढाँचाको उत्कृष्ट उदाहरण हो. XPath सामान्यतया लक्षित नोडहरू चयन गर्न प्रयोग गरिन्छ. यस सन्दर्भमा, XPath हरू वेब पृष्ठमा निकाल्ने पाठ निर्धारण गर्न प्रयोग गरिनेछ. XPath ले स्विडिश सांसदहरूको पार्टीका नाम र फोन नम्बरहरू पहिचान गर्न मद्दत गर्नेछ.
Google क्रोमको स्क्रैर प्रयोग गरेर 349स्वीडिश सांसदहरूको ठेगाना विवरण पहुँच गर्नका लागि
क्रोमको स्क्रैरको साथ, वेब पृष्ठबाट जानकारी हटाउँदै मात्र सरल छैन तर पनि शानदार. तपाईं प्रक्रिया र प्रविधिलाई मज्जा लिनुहुनेछ.
वेबसाइटले सबै स्वीडिश सदस्यहरू र उनीहरूको ठेगानाहरू सूचीबद्ध गर्दछ. सुरू गर्न, कुनै पनि MP मा दायाँ क्लिक गर्नुहोस् र "समान स्क्रैप गर्नुहोस्" चयन गर्नुहोस्. "तपाईंले आफ्नो पर्दामा निम्न प्रदर्शनलाई हेर्नु पर्दछ.
स्क्रैप वेब पृष्ठ कसरी स्क्यान गर्ने चरणमा चरण गाइडद्वारा कदम
यदि तपाईं एक सांसदमा दायाँ-क्लिक गर्नुहुन्छ र चयन गर्नुहोस् "तत्व निरीक्षण गर्नुहोस्" "वर्णमाला सूची" "ग्रिड_6 अल्फा ओमेगा खोज परिणाम कंटेनर क्लस्टर "वर्ग. यो वेब पेज स्क्रैप गर्न दुई कदम प्रयोग गरिनेछ. एक चरणले XPath सँग सांसदका डेटा समावेश गरेको ट्याग चयन गर्नेछ. चरण दुईले पार्टीका नामहरू, नामहरू, र फोन नम्बर जस्ता डेटाको विशेष भागहरू छान्नु र स्तम्भहरूमा डेटा व्यवस्थित गर्नेछ.
एचटीएमएल संरचनामा गहिरो खोल्नुहोस् र तत्वहरू बरकरार राख्नुहोस्. तपाईंको ढाँचामा तत्त्वका साथ ट्यागको संख्या पहिचान गर्न ट्यागहरूलाई बिन्दु दिनुहोस्. लक्षित डेटा समावेश गरिएको अन्तिम ट्याग पहिचान गर्नुहोस्. "स्क्रैप" क्लिक गरी संरचनामा XPath परीक्षण चलाउनुहोस्. "
तपाईंको पर्दामा 349पङ्क्तिहरू समावेश गरिनेछ. 349स्विडिश सांसदहरुको कुल संख्या को प्रतिनिधित्व गर्दछ.
प्रस्तुत डेटालाई स्तम्भहरूमा विभाजन गर्नुहोस्. तपाईंले प्रयोग गरिरहनुभएको वेबपृष्ठमा एचटीएमएल कोड निरीक्षण गर्नुहोस्. यस अवस्थामा, टुक्राहरू निकालेका छन् यस समयमा पहेंलो पहेंलोमा हाइलाइट गरिएको छ. XPath हरूमा बनाइएको स्तम्भ घुसाउनुहोस् र प्लगइन चलाउन "स्क्रैप" मा क्लिक गर्नुहोस्.
यदि तपाइँसँग XPaths को आधारभूत ज्ञान छ भने, प्रोग्रामिङ बुझ्ने तपाईंको लागि एक हेक्टेयर कार्य हुनेछैन. स्क्रैप स्क्रैप वेब पेज कसरी स्क्यान गर्ने माथिको हाइलाइट गरिएका चरणहरूले तपाईंलाई मार्गदर्शन गर्दछ. यदि तपाईं बहुविध वेब पृष्ठहरू स्क्रैप गर्न काम गर्दै हुनुहुन्छ भने, तपाईंलाई प्रोग्रामिंग कुञ्जीहरू आवश्यक पर्दछ Source .